छोरा बाकस भित्र : ७६ वर्षीया आमा भने भिडियो कल गर्ने प्रयासमा ! – Khabarhouse
Khabar house | १० बैशाख २०७७, बुधबार ०३:५१ | Comments
काठमाडौं : युएईको अबुधाबीमा ३० दिनअघि बि’तेका ३६ वर्षीय हरिशरण डोटेलको श’व उतै छ । काकाको अन्त्येष्टि गर्न नपाएकोमा नुवाकोटको बेलकोट– १२ मदानपुरका २३ वर्षीय अश्विन बेचैन छन्। पी’डाले वि’क्षिप्त काकीको हेरचाह गर्ने मात्र होइन, अन्जान हजुर आमालाई यो खबर कसरी सुनाउने? यी युवालाई सिंगो पृथ्वीको भार टाउकोमा परेजस्तो भएको छ।
वैदेशिक श्रमबजारमा पसिना बेच्न गएका युवाको मृत्यु यो पहिलो वा अन्तिम घटना होइन। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामीले लेखेका छन् । एक युवाको मृ’त्युले सिंगो परिवारको भाग्यरेखा कसरी भाँडिन्छ भन्ने रिपोर्टिङ गर्न केही दिनअघि हामी हरिशरणको गाउँ पुग्यौँ । काठमाडौंबाट करिब तीन घन्टाको यात्रापछि मदनपुर, डोटेलगाउँको उकालोमा अश्विन भेटिए ।
उनैले आफ्नो परिवारको व्यवस्था बयान गरे । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हरिशरण अबुधाबी गएका हुन् । गत ९ चैतमा उनको मृ’त्यु भएको खबर आयो । काठमाडौं नेपालटार स्थित डेरामा बस्दै आएकी ३४ वर्षीया श्रीमती सुशीला खबर सुनेर ढलिन् । काकाको मृ’त्यु भएकै दिनबाट परिवारका सबै सदस्यले एक छाक नुन खान छाडेका छन् । तर, शंका होला भनेर वृद्धा हजुरआमाको खानामा तरकारी टुटेको छैन ।
अझ उनलाई नुन हालेको कालो चिया त पेटभरि खान मन पर्छ। सबेरै उठ्नासाथ उनी अँगेनोमा दाउरा जोरेर कालो चिया बनाउँछिन् । ‘अँगेनोको छेउमा बसेर चिया खाएपछि हजुर आमा आँगनमा निस्कनु हुन्छ । कहिले पँधेरोबाट पानी ओसार्नुहुन्छ, कहिले गोठ सफा गर्नुुहुन्छ,’ अश्विनले हजुरआमाको दैनिकी बयान गरे । हामी उनको घरमा पुग्दा हजुरआमा मकै खोस्लाइ रहेकी थिइन्।
लक्ष्मी आफ्नै धुनमा हराउँछिन् । तर, जब उनले बुहारीको फुंग उडेको अनुहार देख्छिन् बेचैन भएर नातिलाई सोध्छिन् । तर, काकीलाई सन्चो छैन, डाक्टरलाई देखाएर ल्याएको भन्दै अश्विनले हजुर आमालाई फुल्याउँछन् । बुहारी यता बिरामी छिन् उता छोरालाई पत्तो छैन भन्ने लागेर वृद्धा पिरोलिन्छिन् । नातिको खल्तीबाट आफैँ फोन निकालेर फोन गर्न भन्छिन् ।
तर, नातिको हात हिउँ जस्तै चिसो हुन्छ जब ती विवश वृद्धाले विदेशमा रहेको छोरासँग फेस बुकको भिडियो कलमा कुरा गर्न खोज्छिन् । ‘फेस बुकमा भिडयो कल गर, म आफैँ भन्छु भनेर जिद्दी गर्नुहुन्छ,’ अश्विन भन्छन्, ‘कहिले मोबाइलमा ब्लालेन्स सकियो भन्छु, कहिले काका ड्युटीमा हुनुहुन्छ भनेर टार्छु ।’ बुहारी यत्रो बिरामी हुँदा एक कल फोन पनि गरेन भनेर वृद्धा आफ्नै छोरासँग पनि गुनासो गर्छिन् ।